Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iqashiso lomhlaba Umhlaba wezoLimo Cavite Amadeo
IBANAY-BANAY SUB-DIVIDED FARM LOT Indawo: Brgy. I-Banay-Banay, Amadeo, Cavite ngoku Vula ngokuThengisa! Isigaba 8 9 Kuthengisiwe- kwisigaba 1- 5 ================================= ===== Isigaba se-9 sokwandiswa kwe-SAMPLE COMPUTATION Ixabiso / Sq.m: P3,000.00 Indawo yeLot: 303sqm / Inner Lot P909,500.00 272,700: tcp pXNUMX ....
Ifama yeAmadeo ibekwe eBrgy. I-Banay-Banay- Tamacan, i-Amadeo, i-Cavite ihambahamba kufutshane ne-MSSL Balite Falls Resort Resort kwimizuzu eyi-15 ukusuka kwiPrince Plaza Silang imizuzu engama-30 kude ne-NBI Tagaytay Ukuhlaziywa koPhuculo: I-On-Going Drainage kunye neNdlela yoKwakhiwa kweNdlela: 3,000 kwi-sqm yeAlmum yokufumana: 300sqm ukuya kwi-486sqm. ...
1,297,688 Peso ₱
umbono Umhlaba wezoLimo ishicilelwe iintsuku 5 eyadlulayo
1,248,000 Peso ₱
umbono Umhlaba wezoLimo ishicilelwe kwiiveki 1 ezidlulileyo
1,301,480 Peso ₱
1,211,180 Peso ₱
1,136,000 Peso ₱
1,349,999 Peso ₱
1,359,999 Peso ₱
umbono Umhlaba wezoLimo ishicilelwe kwiiveki 2 ezidlulileyo
1,499,999 Peso ₱
I-Amadeo ligama leSpanish nelamaPhuthukezi, elivela kwigama lesiLatini elithi Amadeus, "umthandi kaThixo", "uyamthanda uThixo", okanye ngokuchanekileyo "ngenxa yothando lukaThixo" (uguqulelo olunikezwe kwidrama yobomi bukaMozart, Amadeus, " oyintanda kaThixo "ukuba akanakuchazeka). Kwi-Galician, igama elivela ku-Amadeu. Ingabhekisa ku:
IPhilippines ((mamela) FIL-ə-peenz; IPhilippines: IiPhilipinas [ˌpɪlɪˈpinɐs] okanye iiPhilippines [ˌfɪlɪˈpinɐs], ngokusemthethweni iRiphabhlikhi yasePhilippines (Philippines: Republika ng Pilipinas), lilizwe elikwiziqithi ezikwi-Southeast Asia. Ikwisimo esentshona yoLwandlekazi lwePasifiki, iqulathe malunga neziqithi ze7,641 ezahlulwe ngokubanzi phantsi kwezahlulo ezithathu eziphambili zommandla ukusuka emantla ukuya emazantsi: iLuzon, Visayas, neMindanao. Idolophu enkulu yakwiiPhilippines yiManila kwaye esona sixeko sihlala abantu abaninzi sisiXeko saseQuezon, zombini ziyinxalenye yeMetro Manila. Ukhuselwe luLwandle lwaseMzantsi China ngasentshona, ulwandle lwasePhilippines ngasempuma kunye nolwandle lweCelebes kumazantsi mpuma, iiPhilippines zabelana ngemida yaselwandle kunye neTaiwan emantla, iJapan ukuya empuma-mpuma, iVietnam ukuya entshona, iPalau ngasempuma, neMalaysia naseIndonesia emazantsi. Indawo eyiPhilippines kwi-Pacific yoMlilo wePacific kwaye ikufutshane neikhweyitha yenza ukuba iPhilippines ithambekele kwiinyikima zomhlaba kunye nezaqhwithi, kodwa iphinde ibeke ngezinto ezininzi zendalo kunye nezinye zezinto eziphilayo ezibalaseleyo emhlabeni. IPhilippines inendawo ye-300,000 km2 (120,000 sq mi), ngokwe-Philippines Statistical Authority kunye ne-WorldBank kwaye, njenge-2015, yayinabemi okungenani be-100 yezigidi. Ukusukela ngoJanuwari 2018, lilizwe lesibhozo elinabemi abaninzi eAsia kunye nelizwe le12th nelona lizwe linabantu abaninzi emhlabeni. Phantse i-10 yezigidi ezongezelelekileyo iiPhilippines zaye zahlala phesheya, ziquka enye yeyona ndawo ibalulekileyo emhlabeni. Iintlanga ezahlukeneyo kunye neenkcubeko zifumaneka kuzo zonke iziqithi. Kumaxesha e-prehistoric, i-Negritos yayingabanye babemi bokuqala beziqithi. Balandelwa ngamaza alandayo abantu base-Austronesian. Ukutshintshiselana kunye neMalay, Indiya, Arab kunye ne-China zenzekile. Emva koko, amazwe ahlukeneyo okhuphiswano lwaselwandle asekwa phantsi komgaqo wedus, rajahs, sultans kunye ne-lakans. Ukufika kukaFerdinand Magellan, umhloli wamazwe wasePortugal okhokela iinqanawa zaseSpain, eHomonhon, e-Eastern Samar e1521 kwaphawula ukuqala kolawulo lwe-Rico. Kwi-1543, umhloli wamazwe waseSpain, uRuy López de Villalobos, igama liyiqithi iLas Islas Filipinas, ehlonipha uPhilip II waseSpain. Ukufika kukaMiguel López de Legazpi ovela kwisiXeko saseMexico, e1565, kwaqaliswa ukusekwa indawo yokuhlala yase-Hispanic. IPhilippines yaba yinxalenye yoBukhosi baseSpain iminyaka engaphezu kwe-300. Oku kwaphumela ekubeni ubuKatolika buyeyona nkolo iphambili. Ngeli xesha, uManila waba sisixhobo esikwintshona ye-trans-Pacific yorhwebo exhuma iAsia ne-Acapulco e-Melika isebenzisa iigalari zaseManila.Ngexesha le-19th yenkulungwane yanika i-20th, i-Philippine Revolution yalandela ngokukhawuleza, eyathi yabangela okuqala IPhilippines Republic, ilandelwa ligazi lePhilippines-Imfazwe yaseMelika. Imfazwe, kunye nobhubhani wekholera, wakhokelela ekufeni kwamawakawaka emfazwe kunye namashumi amawaka abemi. Ngaphandle kwexesha lokuhlala kwamaJapan, i-United States yagcina ubukhosi kwiziqithi de kwaba semva kweMfazwe Yehlabathi II, xa i-Philippines yamkelwa njengelizwe elizimeleyo. Ukusukela ngoko, ilizwe elizimeleyo lalisoloko linamava alusizi ngentando yesininzi, elaliquka ukubhukuqwa kozwilakhe ngoguquko olungenabundlobongela.IPhilippines lilungu elasungula uMbutho weZizwe eziManyeneyo, uMbutho wezoRhwebo weHlabathi, uMbutho weZizwe zase-Southeast Asia. , iforamu yokuBambisana kwezoQoqoqsho ngeAsia-Pacific, kunye neNgqungquthela ye-Asia. Ikwabamba nekomkhulu leBhanki yoPhuhliso yase-Asiya. IPhilippines ithathwa njengemakethi evelayo nelizwe elisandula ukuphuculwa, elinokutshintsha koqoqosho ukusuka ekubeni kusekwe kwezolimo ukuya kwelinye kusekwe kakhulu kwiinkonzo nakwimveliso. Kunye ne-East Timor, iPhilippines yenye yeelizwe ezaziwa ukuba zingama-Southeast Asia.